Guud Mar Dagaaladi Sokeeye ee Somaliya.
Waa marka ugu horaysee waa inaan xusaa inaanan ahayn qof taariikhyahan ah (Historian). Waxaa taas macnaheedu yahay in waxyaabaha hoos ku qorani ayna ahayn fikradayda iyo fahmideyda shakhsiyeed, balse uu qoraalkani yahay ururin guud oo aan ku sameeyay bugaagtaas qalaad ee faraha badan ee aan nasiibka u yeeshay inaan akhriyo.
Yaa Riday Dawladii Maxamed Siyaad Barre?
Madaxwayne Maxamed Siyaad wuxuu ahaa nin marka laga bilaabo maaliintii uu xukunka dalka hantiyay 21kii Oktober , 1969 tan iyo maanlintii laga tuuray xukunka Janaayo 27,1991. Hadba xeelado kala duwan ku ayaama gaara, wuxuu ahaa nin aan aqoon wadan lahayn oo wax walba ku dayay : Somalinimo, Carabnimo, Afrrikaanimo, Ciidanimo, Xisbi ahaan, Hantiwadaag ,Laba kaclayn, Laba gadoon ,U tuuta gashasho ,Hanti goosad, Ul yar u qadaasho ,Kala qalajin, Hanjabaad ,Dhabarjabin,Qabiildiid, Oday odayeen qabiil ku shaqaysasho iyo in ala inta tab ah oo uu is lahaa ayaamo ayaad ku sii daaqi doontaa marka laga bilaabo sanadahii uu horeeyay tan iyo bartamahii sideetaanadkii wuxuu ilaa iyo xad soo dhawaystay qabiilka uu ka dhashay ee (Mareexaan) iyo labada qabiil ee Ogaadeen iyo Dhulbahante. Markii uu xooray Axmed Sulaymaan wuxuu waayay qayb wayn oo ka mid ahayd Dhulbahantaha.
Laakiin Dhulbahantuhu waxay ku fiicnaayeen oo ay ku amaana yihiin marnaba hub inta ay gurteen jabhad ma aysan samaysan amxaaro iyo meel baasna may aysan aadin. Markii ay isku kaceen isaga iyo Aadan Gabayaw dabayaaqadi 1988 oo ka dibna uu xabsiga dhigay wuxuu maalmahaasba waayay kalsoonidii ogaadeenka oo waa tii ay baxeen oo ay samaysteen jabhadoodi ay ugu magac dareen SPM.
Sanadkii 1989kii waxay ninkaas talada xumaa isku soo hareen oo ummada Soomaaliyeed isugu danbeeyeen qaar ka mid ah qabiilka uu ka dhashay Mareexaan oo kuwo farabadan oo ay ka mid ahaayeen reer dalalka hore isu waayeen.
Intaas kuma uusan joogine ee bilawgii sanadkii 1990kii wuxuu maamulkii gaashaandhiga iyo gaar ahaan umuurihii Xerada 77 ka wareejiyay Maslax isago oo u dhiibtay Morgan. Arrintaas waxay aad uga xanaajisay xoogi ugu danbeeyay ee ninkaas waayahaas danbe talada ku hayay iyo qabiilkuu isagu ka dhashay.
Dawladii Maxamed Siyaad waxay ahayd Dawlad ay iska hor yimaadeen dadwaynihii iyada hoos imaanayay, waxaana dhacday inuu maalinba qabiil ka mid ahi qabiilada Soomaaliyeed dibada u baxo oo hubka gurto .
Qabiilkii ugu horeeyay ee ay dadkiisu iska hor yimaadaan wuxuu ahaa qabiilka Majeerteen oo 1979 samaysatay jabahad magaceeda la yidhaah SSF, hase yeesha sanad kadib isu badashay SSDF.
Waxaa iyana ku xigay qabiilka Ogaadeen oo 1988kii samaystay jabhada SPM.
Waxaa ugu danbayntii hal sano iyo bar intaysan Dawladaasi dhicin jabhad samaystay qabiilka Hawiye oo isna jabhadiisa ula baxay USC uu hogaaminayo caydiid.
Ugu danbayntii sanadkii 1990 iyadoo dhibaatadii dalka ka jirtay sii badatay oo xitaa caasimadii dhamayd ay noqoqay nal,aan, biyo la,aan ,nabad galiyo la,aan Bangiyadii ay baaba,een sicir barakii boqolkiiba dhawr boqol isku taagay oo waxba walba isku dhalaaleen oo xitaa urur siyaasi ah oo "Manifeisto" la yiraahdo odayaal Soomaaliyaad oo qabiil walba leh magaalada bartankeeda ku sameeyeen , waatii dadku bandaw sameeyeen talo-xumadii iyo farsamo-xumadii Dawlada awgeed , waatii dadku hubka gurtay oo madaxtooyadii la weeraray.
Hadaba su aasha is waydiinta mudani waxay tahay , sidee baa looga adkaaday Maxamed Siyaadkii dhamaa ee haystay Dawlada dhan wax walba haystay ,ciidamo bad,daayuurado, taangiyo, madaafiic iyo wax walba.? Ø
Jawaabtu waa dhawr arimood.... Mar haddey meel ka dhacdo xaq daro cid ala cidii xaq daradaas la dagaalantaaba waxay noqdaan dad xaq ku diriraya, xitaa inkasta oo aynu aragnay inay jabhadii Soomaaliyeed ahaayeen kuwo laftigoodu aan xaq ku socon waliba kasii liita Maxamed Siyaadkey doonayeen inay badalaan kuwaasi marka ugu horaysaba kuwo cadawgii ummada u tagay oo xaq daro adeegsanaya ayeey ahaayeen, waxay ahaayeen xaq daro xaq daro ku badal, qabyaalad qabiil ku badal.
Khilaafkaas xaga qaxootiga ah iyo waliba arrimo kale oo Isaaqu Dawlada u tirsanayeen waxa ay keneen in kulan lagu qabtay magaalada Jidda ee dalka Sucuudi Arebiya 1981kii laguna dhawaaqo jabhad cusub oo mucaarad ku ah Dawlada Maxamed Siyaad Barre. Jabhadaas oo lagu magaacabay Jabhada Dhaqdhaqaaqa Soomaliyeed amaba Somali National Movement (SNM).
Abuuritaanka SNM wuxuu keenay in Isaaq badani gaar ahaan dhalinyaradii ay jabhadaas ku biireen. Maamulkii SNM hogaaminayay iyaga oo ka faa,idaysanaya xidhiidhkii xumaa ee M.S. Barre iyo Minguste Xayle Mariam ka dhexeeya, iyo kala jabkii ururkii SSDF oo markaas xaaladiisu sii liicaysa, Itoobiyana ay doonaysay jabhad lagu badalo SSDF, waxaa SNM ay saldhig ururka u doorreen dalka Itoobiya.
Maxaa Loo Aqoonsan waayay Somaliland?
Dhinaca Somaliland hadalada Daahir Rayaale Kaahin waxaa ka muuqda in ay adkaatay in la aqoonsado Dawladiisa lagana yabo in uu si kale xal u raadiyo. Sidaa darteed waxaa laga yaaba in ay ka xumaadaan dadkii rabay in ay Dawlad gaar ah noqoto, dhinaca kalana ay ku farxaan kuwii kale ee ka soo horjeeday. Labada qoloba waxaa muuqata in aysan fahmin sababaha loo diiday Dawladnimada ( Somaliland ). Hase yeeshee hadii ayn is waydiino sababah loo aqoonsan waayay waxay noqon karaan;-
Dawladii Maxamed Siyaad Barre markii ay dhisnayd dadka waxaa lagu mashquulin jiray sidii ay Dawlada u ridi lahaayeen. Markii xigtay waxaa lagu dagalamayay xukunka oo jabhadihii baa la isku diray. Ka dib hadda waxaa laisku sii jeediyay Dawlad Goboleed . Waxaa ku xigi doona in dadka Soomaliyeed dhulka laga dhameeyo, wax la dilo,wax gaajo iyo cudur laayaan,wax bahal cuno,ama bad liqdo, wax baxsada oo dalku sidaas dad la,aan kusoo baxo, lana qaato.
Qorshaha burburinta Soomaliya waxaa daliil u ah in hadda magacii Somali uu sii dhamaanayo oo Dawlad goboleedyada aan lagu arag magacii Soomaliga ahaa sida Puntland iyo kuwa soo socda Jubbaland Hiiranland Banaadirland iwm. Waxaa Somaliland lagu khasbi doona in ay magaca iska bedesho sidii Jabouti loogu khasbay. Waxaa lagu maaweelinaya in ka dib Dawlad Goboleedka ay dhisan doonaan Dawlad dhexe ( Feder Somalia ) oo isku keenta dhamaantood. Taasi waxba kama jiri doonaan. Waxaana laga saxiixanaya in Gobol kastaaba uu xiriir toos ah la yeesho Ethiopia, halkaasna laga xukumi doono, kadibna ay ku biiri doonaan Xabashida oo halkaas Soomaliya lagu liqi doono.
Taasi waa midda cadawga rabo in ay Soomaliya ku danbayso, laakiin Ilaahayn tiisu meel ayeey taala, ( Nin Alle leh ma iisho, sidey u il daran tahayn uma Alle la,a ) Ayeey Soomalidu tiraahdaa. Soomaliya waxa ay ku danbaynaysaa siduu Ilaahay ka dhigo iyo innagu dadaalka aan la nimaano, waxayna u dhawdahay in la helo dad ka fiican kuwii hore oo garta wadada wanaagsan iyo sharafta ay leedahay qaranimada iyo muslinimadaba.
La soco qaybta xigta....